गाईघाट नजिकै एक युवा मोटर साईकल सहित अचेत अवस्थाम फेला, चिन्ने कोहि हुनुहुन्छ कि? शेयर गरिदिनुहाेस् – Khabar Patrika Np
गाईघाट नजिकै एक युवा मोटर साईकल सहित अचेत अवस्थाम फेला, चिन्ने कोहि हुनुहुन्छ कि? शेयर गरिदिनुहाेस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३०, २०७८ समय: ८:५७:१०
एजेन्सी । चौदण्डीगढी नगरपालिका १० खैराझोडामा एक युवा मोटर साईकल सहित अचेत अवस्थाम फेला परेको छ । नाम पहिचान नखुलेको अन्दाजी २६–२७ बर्ष उमेरका युवा मदन भण्डारी राजमार्गको गाईघाट तर्फको लोकेशनमा अचेत अवस्थाम रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारले जनाएको छ ।
मध्यान्न १२ बजेको समयमा अचेत अवस्थामा रहेको युवा हाल धरानको घोपामा उपचार भइरहेको कुरा बेल्टार प्रहरीको आधिकारीक फेसबुकमा उल्लेख गरिएको छ । पहिचान नखुलेकाले ब्यक्तिको नाम ठेगाना पत्ता नलाग्दा अनुसन्धान गर्न समस्या भएको छ । प्रहरीले यस पोष्टको आधारमा आफन्तहरुले बेल्टार प्रहरीलाई खबर गर्दिन पनि स्टाटसमा लेखिएको छ ।
प्रदेश २–०१–००१– प २९५६ नं को मिलिटरी ग्रिन रङको मोटरसाईकल सहित अचेत अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । निज मोटर साईकल चालक हाल सम्म पनि अचेत अवस्थामै रहेको हुदाँ निजको यकिन वतन र आफनतको समेत पहिचान नभएको नहँुदा उक्त व्यक्ति र मोटरसाईकल धनिले ई.प्र.का. बेल्टारमा नः ०३५–४४०१००, ९८५२८९०३५५ मासम्पर्क गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।